Inkqubo yokuqeqesha ekhaya kunye nokutya okusebenzayo - Indlela yeMakia
I-Makia yeNdlela: Yintoni ukuqeqeshwa kwexesha elide kunye nokutya kwe-ketogenic?
Indlela yeMakia isisicelo sokusetyenziswa komsebenzi esasungulwa eFinland, esiye saziwayo kwilizwe lakubo kwiminyaka emibini. Le nkqubo inika icebo lomsebenzi onzima elingenziwa ekhaya okanye kwindawo yokuzivocavoca. Ubunzima bokuzivocavoca kwandisa ngokuzenzekelayo ngexesha loqeqesho. Indlela yeMakia iquka ukutya apho amawaka abasebenzisi abafumene isisindo esifanelekileyo kwaye baphucula indlela yokutya.
Imbali Yondlo Yendlela yeMakia
Ndisebenzise bonke ubomi bam, kodwa malunga neminyaka engama-35 ukuya kwimi-40 ubudala, umzimba wam waqala ukuqokelela amanqatha. Utshintsho lwangenzeka kwaye lungaqatshelwa. Umfanekiso owenziwe ngosuku oluhle lwasehlobo elunxwemeni lenza amehlo ami avule.
Ndazilinganisa kakhulu, kodwa emva kokubona umfanekiso ndaya kwinqanaba kwaye ndamangaliswa kukuba ubunzima bam bunyuke kakhulu. Ndandingazibuza ukuba yintoni ephosakeleyo.
Ndadla i-fat-fat spreads, i-yogurt ephantsi, i-yogim yobisi, iziphuzo ezithambileyo ezinomsoco, ama-fat cheeses, imifuno ene-salad e-low-fat dressing, iiprotheyini ezininzi kunye nenyama ephilileyo. Ngokombono wam, ndadla impilo, ngokulandela izikhokelo eziqhelekileyo. Into ephosakeleyo, ayibi kakuhle.
Ndazilinganisa ixabiso le-cholesterol yam, kwaye ayilunganga. I-cholesterol embi yayiphakeme kakhulu kwaye inhle kakhulu. Emva kokucela iingcebiso, ndafumana imiyalelo malunga nendlela yokunciphisa amafutha ekudleni.
Ndingakwazi njani ukunciphisa amafutha kwindlela yokutya? Ukongezelela, umntu ondinike isiluleko wayedlulele ngaphezu kwam. Ingxaki yazalwa.
Emva koko ndasebenza kwimbutho apho ulwazi lwe-physiology lomzimba lubalulekile. Ndinezemfundo efanelekileyo kunye nolwazi oluyisiseko lokusombulula ingxaki. Ndaqala ukuhlolisisa ngakumbi nangakumbi umzimba we-metabolism. Ndafumanisa xa umzimba usebenzisa ama-carbohydrate kwaye xa utshisa amanqatha. Ndaqaphela ngokukhawuleza ukuba i-carbohydrate ephezulu kunye neprotein ye-protein ngaphandle kwamafutha emvelo iya kuqhubela umzimba kummandla apho onke amandla afunyanwa kwaye atshisa. Ukuba inani leekhalori ezivela ekudleni lincinci kakhulu kwaye ukutshisa amafutha akwenzeki, umphumo wenzalo yokuzuza ubunzima.
Ndaqhelana noDkt. Atkins ukutya. Kuyinto engqubuzanayo kunye nokutya okubi, kodwa ingcamango eyisiseko iphelele. Ngaloo, izigidi zabantu abangaphezu kwamandla omhlaba wonke baye bafikelela kwisisindo esifanelekileyo. Umzimba uqhutywa yidlo kwilizwe apho phantse wonke amandla avela kumafutha. Umzimba useburhulumenteni obushushu obuqhubekayo, kwaye ukulahleka kwesisindo kukukhawuleza kunokutya. Inkqubo ihlala ishisa ioli egciniweyo ngelixa kuqinisekiswa ukuba inani leoli kunye neprotheni ekudleni lanele. Ukongezelela, kuqinisekisa ukuba ufumana izondlo ezaneleyo, apho umzimba ubeka i-glucose.
Ndaqalisa ukutya kwe-Atkins, kwaye iziphumo zazimangalisa. Kwiinyanga ezimbalwa, ndandichitha amafutha amaninzi ayenayo. Ndilahlekelwe ngaphezu kweepounds ezingama-33. Ukongezelela, ndandichitha ukugqithisa ebusweni bam endicinga ukuba kungenxa yokuphefumula endiyisebenzisayo emsebenzini wam. Ngelo xesha, ndaqalisa nokuqala kwam umzimba, kwaye ndaqaphela umphumo wabo ekwakheni ubunzima bomzimba.
Indlela ye-Makia ine-Spark yokuqala
Imidiya yafumana yonke into emininzi kwiminyaka embalwa edlulileyo malunga neengozi ze-Atkins yokutya ngenxa yokuba uyidla kuphela i-bacon, ibhotela, namaqanda. Abantu abaninzi baqala "i-Atkins Diet" ngesiseko sembewu encinci yolwazi, ngenxa yoko ukuba iivenkile zaphuma ngaphandle kwebhotela. Ngaphandle kwesiseko esilungileyo, kodwa ke, ukutya okunokwenziwa kwe ketogenic akuphumelelanga, kwaye iziphumo zimbi okanye ziyingozi. Ukutya kwe-Atkins kuyisetogenic, kwaye xa kulandelwa ngokufanelekileyo, udla imifuno eninzi, ixabiso elincinci leprotheni kunye nemali eyaneleyo yamafutha amnandi.
Nangona kunjalo, nge-Method Makia ye-ketogenic yokutya ungadla phantse naluphi na ukutya okucocekileyo, ngaphandle kwee-carbohydrates elula. Isixa semifuno isoloko sinesiqingatha seplate, ngoko isabelo sabo siphezulu kakhulu kunokutya okuqhelekileyo.
Kule minyaka ndiyenze ukuzama ukuphucula ukutya kweetogenic. Ngenxa yengqesho, ndafumana ithuba lokufumana ixabiso langempela legazi lam. Indlela yokwenza i-Makia Reboot yinguqulelo yakutsha yeprogram ye-ketogenic yokulahlekelwa kwesisindo. Ivela kwindlela ye-Atkins, kodwa ineziphumo eziphuculweyo ezenza ukutsha kweoli kusebenze ngakumbi.
Indlela yokwenza i-Makia I-Reboot ke ngoko kukutya okwethutyana kunye ne-ketogenic apho ungayinciphisa umzimba. Njengoko usondela kwisisindo esifanelekileyo, uya kuMphathi oqhelekileyo we-Method Makia Basic Diet ophelele yonke intsapho.
Ingxaki ngeenkqubo ezahlukeneyo zokulahlekelwa kwesisindo ngokuqhelekileyo ziqulethwe kukuba umntu osentsapho kufuneka alungiselele kwaye azilinganise ukutya kwakhe. Indlela yokutya yaseMakia yenzelwe ukuba intsapho yonke idle ukutya okufanayo. Ukuba elinye ilungu lentsapho lizama ukufikelela kwi-ketogenic state, iphuma nje inxalenye yohluba yerhafu yerhafu. Kungenjalo, ukutya kukufanayo kumntu wonke.
Iminyaka yokugqibela ndiye ndiphuhlisa isicelo seMet Makia net. Kwaphela iminyaka, ndandilandela indlela efana nendlela yokutya okuyiNtloko yeMac Makia, kodwa ekuqaleni kwalo msebenzi omkhulu, ndazifaka ngamabomu i-carbohydrates efana ne-buns, isinkwa esilula, amazambane, iifotyi, kwaye ndashiya ukunyuka kweoli. Nangona kunjalo, inzuzo yam isisindo yaphuma esandleni kwaye yavuka ukusuka kuma-183 iipounds ukuya kwi-208. 6 iipounds ngonyaka. Injongo yam yayikukuvavanya umsebenzi wokutya we-ketogenic wakutshanje. Imiphumo yee-carbohydrates elula yayidlulele ngakumbi kunokuba ilindeleke, kwaye ukulawula imali yabo kwakunzima. Isiphumo sasinamandla ngakumbi kunokuba ndandifuna.
01. 01. 2015 Ndaqalisa iNkqubo yeMakia yokuqalisa kwakhona. Kwiinyanga ezimbini ubunzima bam behla kwi-176. 4 iipounds, ngoko inguqulelo yam yakutsha yenkqubo yokulahlekelwa kwesisindo iyasebenza kakhulu. Ukuxhamla 32. 2 iipounds ezimbini kwiinyanga! Ivakalisa kakhulu, kodwa ngexesha lokulahlekelwa kwesisindo, andizange ndibe nelambile. Umzimba wam uhlale unamandla kwaye ndandiziva ndilungile. Ndaphinda ndenza i-Method Makia iqhuba rhoqo. Ngexesha lokutya kwe-ketogenic, abantu bangasebenzisa ngokuqhelekileyo.
Ukufumana ulwazi kubalulekile ngaphambi kokuba uqalise i-Method Makia Reboot. Inkcazo yolwazi ichaza zonke iinkcukacha ozifunayo ukuze uqalise inkqubo yokulahleka kwe-ketogenic yokulahleka kwesisindo. Uhlelo lwe-ketogenic loss loss program, xa luphunyezwe kakuhle, lukhuselekile kwaye lunempumelelo. Nangona kunjalo, ngaphandle kolwazi oluhle kunye nokuzibophelela, akufanele uqale.
Kwakhona, kuyaphawuleka ukuba akudingeki ukuba uqale ukutya kwe-ketogenic ukuba unesisindo esifanelekileyo. Ngaloo ndlela, umzimba wakho usebenza kakuhle, kwaye awudingi i-Method Makia Ukuqalisa kwakhona, kodwa ukutya okusemgangathweni kwanele ukunqanda umnqweno weesekese nokunciphisa iimvakalelo zendlala.
Ekugqibeleni, ndiya kucaphula enye indoda ebulumko kunazo zonke, ilizwi layo liyikhokelo yam ekulungiseleleni le nkcukacha.
"Ukuba awukwazi ukuyichaza loo nto ngokucacileyo, awukwazi ngokwaneleyo malunga nayo. "
J. A Source . Needlehill, umsunguli we-Method Makia